Makhaya iwayini imimandla Yurophu ingaba i-phupha kuba wonke iwayini connoisseur. izidiliya eziba obumangalisayo, sezulu libalele, amawa ingane, nokutya okumnandi ukuchaza ezi mimandla iwayini ephezulu. Ukuba ungumthandi wewayini kwaye ufuna ukubona eyona Wineries yaseYurophu kunye nendlela yokufika khona, Gcina A Train kuya kukunceda unike- khona!
Funda kwi ukwazi oko eYurophu kufuneka anikele abathandi iwayini. Sibheja ukuba ubusele uyipakile engqondweni yakho ngaphambi kokugqiba eli nqaku!
I-Rhone Intlambo iwayini ingingqi sele okuninzi ukunikela kwi yenkcubeko incopho ka-imboniselo kunye Lyon ekubeni omnye UNESCO Ihlabathi zelifa Lemveli. Layo esilula, yokupheka yokwenene, I Rhone izulu lover iwayini kunye iiwayini edume Crozes-Hermitage, ICote-Rotie, kunye neChateauneuf-du-Pape yokuzoba abakhenkethi bewayini abavela kwihlabathi liphela.
I-Tuscany wineries anikele olugqibeleleyo iwayini lizwe amava. AyisiTuscany kuphela enezinye zazo I-Itali awona maxhwebhu adumileyo, efana DOC entsha Val d'Orcia, Vino Nobile di Montepulciano, kodwa lo mmandla ukwaphuphuma likratshi, uthando ezweni, kwaye immense uvuyo lwe ngayo nabanye.
Usapho kuphela oluvelisa Riesling kwi zabo 4.2 eehektare zomhlaba obubonakala ngokuba ulungelelwano egqibeleleyo phakathi asidi nesakhiwo. Ii wayini ezihlonitshwayo zisasazwa kwihlabathi liphela. Ukuba ngaba ungathanda ukuba uxhamle iwayini on-site, qiniseka ukuba wenze amalungiselelo kwangaphambili.
Ixesha lokuqala Amehlo akho ubeke phezu masimu zalo eweni, wena usindwa yokunqaba okanye kuzo zonke. (Ingakumbi ukubeka ibhotile ezimbalwa zewayini). Lunxulumano yi - UNESCO njenge World Heritage Site, Eli cala lisikelelekileyo leChibi laseGeneva livusa useto lweentsomi lweebhalkhoni ezizalise iintyatyambo, zendalo amanzi aluhlaza ukuba ndifeze kuphela ngakumbi iglasi Chasselas bendawo. Ngokufanayo, layo lake-hugging plots soar at extreme slants that only a mountain goat and team should harvest.
Idolophu Lausanne ngokupheleleyo imi kwelinye ekupheleni Lavaux. Yenzela indawo elungileyo yokujonga ukuhlola ingingqi. ngaphakathi Switzerland, Lausanne ngenene umnini uninzi xa kuziwa ezidiliyeni. (Umasipala ungumnini wengingqi ekhulisa iwayini engekho ngaphantsi 62 zebhola, ekuveliseni ukuya ku 400’000 iibhotile ngonyaka.)
Back iibhegi zakho uze ubaqononondise iglasi yakho. Lifikile ixesha lokuba ukhwele uloliwe okanye ezimbini ukujonga i-Wineries ezigqwesileyo eYurophu. Gcina A Isitimela izakukubonelela ngamatikiti akhawulezayo nangokhululekileyo ngaphandle kwemali efihliweyo. Ingaba ulunde ntoni? Ixesha ukufumana iwayini yakho, on!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia ngeposi Eyona Wineries Aseyurophu Njani Ukufumana Apho ikhadi lakho site? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-wineries-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)